Ny tranonkala lalina, toerana lalina feno zavatra tianao sy tsy tianao jerena. | Avy amin'ny Linux
Ny tranonkala lalina, toerana lalina feno zavatra tianao sy tsy tianao jerena.
Nano | | hafa, soso-kevitra
La web deep (DW manomboka izao) dia iray amin'ireo angano an-tanan-dehibe fanta-daza rehetra, vitsy amin'ireo izay mifamatotra mafy amin'ny tontolon'ny internet no tsy mahalala ny fisiany, na dia mandalo aza izy ireo noho ny antony maro, ny sasany tena lojika.
Fantatro hatry ny ela io fizarana amin'ny internet io, ilay tranonkala lalina, henoko bebe kokoa momba azy io tamin'ny semester voalohany nataoko rehefa nitsidika oniversite tany amin'ny fanjakana hafa aho ary liana te hahafantatra dia nipetraka hiresaka sy hametraka fanontaniana aho. Hay ny DW dia zavatra goavambe, betsaka lavitra noho ny tranonkala fantatsika (izay antsoina hoe tranonkala ambony) ary miaraka amin'ny atiny an'arivony maro isan-karazany sy feno kokoa noho izay azontsika alaina ara-dalàna, na ho amin'ny tsara na amin'ny ratsy.
Amin'ny ankapobeny ny DW dia Internet iray ihany izay fantatsika fa feno tranonkala marobe izay tsy afaka atao index amin'ny alàlan'ny search engine mahazatra, na noho izy ireo dia pejy arisika izay tsy raharahain'ny motera fikarohana, na satria manana atiny tsy azo arovana (Ireo pejy natao tamin'ny flash dia nirongatra avy hatrany tamin'ny DW noho ny tsy fananany html azo ovaina) na koa satria ireo mpandrindra ny pejy resahina dia ninia nanao ny code-ny ho tsy raharahan'ny motera fikarohana ary ... misy pejy tsy miankina sy takelaka mihitsy aza.
Ao amin'ny DW dia be loatra ny zavatra holazaina, mazava ho azy fa ny atin'ny an'ity dia mihoatra lavitra noho ny fantatsika mahazatra ary ny marina dia ao no ahitanao ny tsara sy mahasoa ka maharikoriko sy maharikoriko, lazaiko anao izany. traikefa manokana.
Rehefa mitety ny DW dia mila mitandrina ny maro ary misy fitsipika fototra maromaro tsy maintsy raisina mba hiarovana anao (na farafaharatsiny faran'izay azo atao). Tsy holazaiko aminao ny fomba hidirana na ny fivezivezena, tsy hanome anao antsipiriany aho satria ny zavatra lehibe momba izany dia ny manadihady irery ny zava-drehetra.
Zava-dehibe ny fiheveranao ireo torohevitra ireo, Lalina tranonkala mahaliana nefa mampidi-doza
Mila mampiasa TOR ianao hidirana amin'ny zavatra marobe ao amin'ny DW, raha tsy ataonao izany dia atahorana ianao ary tsy ho afaka hiditra amin'ireo tranokala .onion
Evita ireo tranonkala milaza fa kintana orsa, vatomamy mafy, HC, CP… Ankizy pr0n, ary tsy mahafinaritra.
Aza misintona na inona na inona, na farafaharatsiny na inona na inona tsy azonao antoka.
Halaviro ny "tsena" raha tsy mitady zava-mahadomelina ianao, pr0n zaza "manara-penitra", taova, fanondranana olona sns.
Mahazo namana ao amin'ny DW? Soriko io, ary arakaraky ny halehiben'ny lalanao no tsara kokoa tsy ho voamarika.
Aza mampiasa ny mailakao na misoratra anarana na inona na inona, Raha manao izany ianao dia ataovy amin'ny kaonty mailaka hafa ary raha azo atao ny manome ny tenanao asa mampiasa zavatra toy ny mailaka rotaka, dia vao mainka tsara kokoa.
Aza ampidirina plugin, tsy mety aminao.
Aza milentika lalina ao anaty DW, arakaraky ny halehanao no handehanananao ny loza mety hitranga amin'ny zavatra tsy tianao ho hita na zavatra tsy tian'ny hafa ho hitanao, ary raha tsy vintana ianao dia hahazo horonantsary Snuff (jereo ao amin'ny wikipedia izay iray amin'ireo horonan-tsary ireo)
Raha raisina izany dia tokony ho fantatrao ao amin'ny DW Tsy fantatro "mijery"raha lazaina; fantatro manao antsitrika. Ity dia karazana sarotra, voalohany satria tsy ho afaka hanoratra zavatra toa ny "Creepypasta" ao amin'ny bara fitetezana ianao ary hahita lisitry ny zavatra. Raha te-hifindra eto amin'ity tontolon'ny DW ity dia mila mahafantatra ny adiresy marin'ilay tranonkala tadiavinao ianao, izay mety manana ny adiresy voahodina, teboka voalohany eto amin'ity tontolo ity dia ny Wiki miafina, miaraka amin'io làlana io dia efa manana mihoatra ny ampy hidirana sy hikarohana irery izy ireo. Mazava ho azy, mampitandrina anao aho fa fantatrao izay tadiavinao ary ialao ny fandehanana liana amin'ny toerana tsy dia hainao loatra, toa hafahafa aminao izany na milaza fotsiny fa ao amin'ilay fanovozan-kevitra dia milaza zavatra izay tsy dia be loatra .. mahafinaritra.
Amin'ity sary ity dia ho hitanao amin'ny antsipiriany ny haavon'ny Lalina tranonkala (izay lalina kokoa noho ny fiheveran'ny sasany azy).
Mitandrema, ny atiny dia voamarina hatrany amin'ny ambaratonga 4 amin'ny graf, avy eo avy eo, farafaharatsiny tsy afaka nandalo na tsy nahita zavatra mifandraika aho. Betsaka no milaza fa sandoka tanteraka izy io ankoatr'io fotoana io, saingy satria vitsy ny naneho zavatra azo itokisana, dia kely ny zavatra fantatra.
Azoko lazaina aminao ny zavatra niainako, omaly niditra tao amin'ny DW Rehefa ela no nanaovako azy voalohany dia tsy mora ny mitady zavatra rehefa tsy manana motera fikarohana ianao ary tsy mora ihany koa ny manenjika zavatra isaky ny tranokala. Ohatra, mitady zavatra foana aho toa ny tena macabre creepypastas, izay maro no tsy miresaka momba ny tranonkala mahazatra na ireo very nandritra ny taona maro tao amin'ireo tranonkala taloha.
Misy ihany koa diary manokana amin'ny endrika bilaogy izay tena mahaliana, fitaovana famakiana tena tsara, fa ny fahitana azy ireo dia sarotra, mafy be ary tsy hanome anao ny lalana misy anao aho noho ny antony tsotra indrindra eto an-tany; ny mahafinaritra dia mitady anao. Afaka mahazo boky, lalao ary programa maro ianao, eto ny fizarana an'ity karazana atiny ity dia tsotra in-tapitrisany, ary koa inona, ny protocol bitorrent dia mampihetsika mavokely ny tranonkala lalina.
Tsy very maina koa ny niainako zavatra tena ratsy satria nahita zavatra izay tsy tiako ho hita aho. Raha ny marina, ny pastes sasany dia be sary tokoa ary tsy tiako izany. Tsy nanam-bintana aho fa nahita horonantsary snuff izay tsy snuff mandra-pahatongan'ny fotoana farany ary… Tsy hiresaka momba izany intsony aho. Ny zavatra dia afaka mahita be ianao, na dia tsy maintsy milaza aminao ihany koa aho fa ny tsikombakomba sy ny fisie rakitra marobe dia tsy tratra, tsy dia mora loatra; ilaina ny fikarohana sy ny fanapahana hacking fahaiza-manao satria izany fampahalalana izany, na dia tena lalina dia lalina ao amin'ny DW, voaaro tsara ihany koa, niditra bebe kokoa na latsaka aho mandra-pahatongan'ny «Faritra afovoany»De DW, ary tsy te-hiverina lalina dia lalina aho, tsy misy zavatra mahaliana ahy amin'ireo faritra ireo.
Manao veloma aho, saingy mampahatsiahy anao aho fa ny te hahafanta-javatra no namono ny saka ary na dia ilaina aza ny mahazo ny mombamomba anao ho hitanao ao amin'ny DWNy vaovao tsara ... rehefa milomano lalindalina kokoa izy ireo, dia vao mainka mahita zavatra tsy tianao ho hitanao na olona tsy tianao ho tratrarina.
Mirary soa ny olona ary ankafizo ity angano an-tanan-dehibe ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » hafa » Ny tranonkala lalina, toerana lalina feno zavatra tianao sy tsy tianao jerena.
144 hevitra, avelao ny anao
Tonga tany amin'ny ambaratonga faha-3 fotsiny aho ary tsy nisy proxy (tsy nahatratra ilay ampahany tamin'ny tor) aho, nandritra ny fotoana kelikely dia matetika aho no nankafy ireo tranonkala goavambe
Nahaliana ahy, nidina tany amin'ny farany ambany izay ho lasa ambaratonga 4 aho, nahita zavatra nanenenako mafy
Tsy haiko, amin'ny ambaratonga 4 ve ny kaody loharano Windows?
NPI, tsy nitady an'io karazan-javatra io aho, fa tsy misy mahalala izay mety ho hita ao amin'ny DW ... Nahita tranga tena izy momba ny fanondranana olona an-tsokosoko aho, ary ataon'izy ireo toy ny tsy misy izany, miaraka amin'ny sary sy ny zava-drehetra xD ... raha sandoka izy ireo dia tena vita tsara.
Misy olona mandratra tena, hahita izy ireo avy eo, uuuuh izay hitako xD, mahatsiravina! ahahah
amiasdsad dia hoy izy:
Tsy afaka aho! : co mety tsy hisy hahagaga ahy intsony, fa ny mahatsiravina kokoa, ny tsara kokoa D:
Mamaly an'i amiasdsad
Alvin dia hoy izy:
Inona avy ireo zavatra hanenenanao rehefa mahita ??????
ny pr0n zaza, zava-mahadomelina sa nahazo snuff ??
sa tonga any amin'ny akorandriaka mihidy
Valiny tamin'i Alvin
Inona no anenenanao?
lourdez dia hoy izy:
inona no hitanao? mahalasa saina ahy izany
Mamaly an'i lourdez
iori dia hoy izy:
Ahoana no ahatongavako amin'ireo ambaratonga ireo?
Mamaly an'i iori
Fa noho Andriamanitra nano, antenaiko tokoa fa tsy misy na dia iray aza entanina, nanana traikefa nahatsiravina niaraka tamin'ny DW aho, tsy milaza izany, ary raha manao izany ianao, mitandrema fatratra, satria hahita zavatra manaitra izaitsizy tokoa ianao ary tsy mahafinaritra. Fa misy zavatra mahaliana ao.
ny zaza pr0n fa, ny vitrana sa ny snuff ???
sa tonga tany amin'ny tranokalan'i marianas ianao ary nahita vahiny pr0n avy amin'ny faritra 51 ??
Niditra ny wiki miafina aho ... ny marina tsy dia lazaina loatra
Ny wiki miafina etsy ambony dia tsy manana na inona na inona, ny vazivazy dia ny mipetraka, mamaky, mikaroka. Ny rohy iray dia mitondra anao mankany amin'ny iray hafa, ary amin'ny iray hafa na amin'ny iray hafa. Aza manantena ny hahazo mora foana ny zava-drehetra. Betsaka ny ao amin'ny DW, tsy midika akory izany hoe mora ny mahita azy.
karazana console iza no hitany? Nahita hardcandy aho, tsena sandoka, tena misy vokatra 30 fotsiny, baibolin'i satana, manamboatra fitaovam-piadiana, saingy nitady zavatra tena mahaliana aho ary tsy nisy = /
Mila mandany HOURS ianao amin'ny fikarohana. Nandeha rohy mankany amin'ny rohy aho. Ny hany zavatra tiako amin'ny DW dia ny tantara macabre na paty, tsy raharahako raha tena tantara, firaisana tsikombakomba, ny tena zava-dehibe amiko dia ny fialamboly amin'ny famakiana zavatra vetivety.
Ary ny tsy azoko dia satria na dia ao amin'ny kubuntu na chakra aza aho dia tsy miseho ilay kisary an'ny distro izay ampiasako amin'izao fotoana izao, ny browser fotsiny. Mitaky valiny aho. : p
Izany dia satria ny browser izay ampiasainao dia tsy manana mpandrindra voalamina.
DW no tranonkala maloto misy anarana be voninahitra izay mahatonga ny ankamaroan'ny script-kiddies hahatsapa ho mpijirika lehibe, hahahahahahaha
Tsy mahatsiaro tena ho mpijirika aho fa mitady zavatra izay tsy azoko any an-toeran-kafa matetika. Mahafinaritra izany sy izay mahazo an-tsipiriany mahafinaritra isaky ny avy.
DW no WEB, tsotra sy tsotra.
Toy izany koa fa amin'ny ankamaroan'ny trano fidiovana na zoro maizin'ny disko dia azonao atao ny mividy fanafody azonao eritreretina na amin'ny toerana marjinaly dia mahazo fitaovam-piadiana, raha fantatrao izay alehanao amin'ny tranonkala dia ho hitanao koa izay tadiavinao .
Ny DW toy ny "Cloud Computing" na "Web 2.0" na "Network social" na "Malware" na teny maro hafa mitovy amin'izany dia euphemisma noforonin'ny sampan-draharahan'ny marketing ho an'ny orinasa hahazoam-bola amin'ny tsy fahalalan'ny olona.
Eny, io no tranonkala tsotra sy tsotra, saingy tsy ilay tranonkala mora azo izy io, fa tsy ny neophyte rehetra manokatra an'i Google ary mahazo tranonkala iray izay azonao atao ao amin'ilay antsoina hoe DW. Izay no mahasamihafa azy
Izany indrindra no olana ary ianao mpahay siansa amin'ny informatika dia ho fantatrao izany: mihevitra ny olona fa Google no tranonkala.
Ny olana amin'ny atiny ara-dalàna ao amin'ny tranonkala dia ny anarchika, izany hoe, tsy misy lahatahiry fanovozan-kevitra afovoany. Raha misy lahatahiry toy izany izay tokony hanoratra sy hametaka marika tsara izay rehetra manokatra tranokala vaovao, bilaogy, forum na foo.com rehefa manao izany ampahibemaso izany dia 99% ny entropy misy anio no hifarana satria afaka nikaroka isika atiny avy amin'ny toerana afovoany fa tsy miantehitra amin'ny motera fikarohana izay saika tsy manandrana hahatratra an'io tanjona io fa manana tombon-tsoa manokana mitondra azy.
Androany sady tsy malalaka no tsy misokatra ny tranonkala, misavoritaka izy io. Raha tsy misy lalàna mifehy izay mibaiko azy dia tsy maintsy manohy miantehitra amin'ny motera fikarohana an'ny Google isika fa, na dia marina aza fa miasa tsara dia orinasa tsy miankina izy io rehefa tokony ho eo am-pelatanan'ny fikambanana iraisam-pirenena mety ary mazava ho azy fa tsy mitady tombony.
Ny olona ao amin'ny tsy fahalalany dia miteny hoe "internet" ary manondro ny Google na ny Face $ hit na mitovy aminy ary ny tena izy dia lehibe kokoa noho izany ny tranonkala, raha ny marina dia lehibe kokoa noho ny HTTP protokolop:
"Ny tranonkala dia masinina sy fitaovana mifandraika rehetra izay azo idirana amin'ny fitaovana hafa mitovy amin'izany."
Izany no antony mahatonga ny fitenenana hoe "Deep Web" tsy misy antony, toy ny miresaka momba ireo "sisin-tany" ao amin'ny fiarahamonina iray izy ireo, ary noforonina mba hitazomana ny toe-piainana sasany ary ny fampiasana azy ireo dia entin'ny orona.
Fa nisy nahita dokam-barotra ho an'ny lehilahy na mpivarotra zava-mahadomelina ao amin'ny pejy mavo?… Andao, zavatra mitovy io. Raha ny tokony ho izy, raha tsy mitandrina tsara ao amin'ny DW ianao dia mety hiafara amin'ny mitady olana; sahala amin'ny fitsangatsanganana an-tanàna mahantra io.
we126 dia hoy izy:
Azafady ny tsy fahalalako. Voalaza fa ny proxy dia takiana amin'ny ambaratonga 3, fa raha mampiasa Tor aho dia tsy misy olana? sa ahoana izany zavatra izany?. Mampanantena aho fa tsy ho ambany xD
Valiny amin'ny we126
ny Tor ary ankehitriny, raha tonga any amin'ny akorandriaka na marianas ianao, dia lazao hoe azafady, ho faty aho tonga any. ary tsy mahita pr0n habaka
Wes126 dia hoy izy:
Miala tsiny amin'ny tsy fahalalako hahaha xD fa milaza kosa fa ho an'ny haavo 3 dia miresaka proxy izany, saingy marina ve fa raha mampiasa Tor aho dia tsy misy olana? Mampanantena aho fa tsy ho ambany xD
Heveriko fa maro amintsika no mampiasa azy rehefa mitady na mahita DB halatra na fampahalalana avy amin'ny orinasa na olona izay tsy tokony hojerentsika ... na izany aza. Amin'ny lafiny sasany, maro amintsika no manana na mampiasa azy.
Fa ny mandeha mitady pôrnôn-jaza, famonoana olona na zavatra toy izany. Heveriko fa tsy hanandrana akory aho.
Manoro hevitra anao fotsiny aho mba tsy handehandehanana manambara izay zavatra hitanao ao amin'ny DW ary tsy hitsara rehefa mampiasa ny teny hoe "p9rn 1nf4ntil" dia misy agents double doble ... (raha fantatrao ny tiako holazaina). mahafaly
Mahita fandaniam-potoana miditra ao aho noho ireo antony ireo ary satria azo antoka fa mifanindry amiko izy ireo satria tsy misy olona eto na pedofile na sadista.
- Miadana be ny hafainganam-pandeha.
- Mahatsiravina ny fikarohana
- Mahaliana ny atiny nefa zavatra iray manokana ihany no halainao raha mitady zavatra manokana ianao taloha
- Ny gore mety ho hitanao dia "tsiambaratelo" maratra araka ny nolazaiko, izany hoe ireo iharan'ny fanafihana sy zavatra tena manokana na fanolanana…, ny gore mahazatra dia efa ao anaty rototra sy lo.
- Raha na any amin'ny galerie shit ianao misy zavatra tsy mahafinaritra dia miainga avy eto ny kibonao ary manapa-kevitra ny hanafoana ny tor ao amin'ny pc ianao.
Ampiasao amin'ny zavatra mivaingana sy amin'ny fahalalana izany. Ny zavatra hafa rehetra ataoko dia hanimba ny andronao na hahatonga anao tsy mandanjalanja toa ilay tovolahy niasa tamin'ny google ary nandalo votoaty mafy.
Mamaly an'i ps
aza adino i bestgore, ilay tranonkala nanambara hoe iza ilay "psycho kanadiana"
«- Raha toa ka mandeha amin'ny galerie misy zavatra tsy mahafinaritra ianao, avy eto dia marary ny kibonao ary manapa-kevitra ny hanafoana ny tor ao amin'ny solosainao ianao.»
Nitranga tamiko izany tamin'ny alàlan'ny galerin'ny lozam-pifamoivoizana 😛 Mety ho tsara ho an'ny rehetra ihany koa ny mahita azy, indrindra eto amin'ny fireneko izay miandry ny olona hiampita arabe amin'ny arabe iray ihany fa tsy amin'ny sisin-dàlana, miampita any Colorado izy ireo, tsy mametraka ny fiara familiana famantarana sns.
farafaharatsiny mba manaitaitra ilay izy, misy tanjona tsara, any raha ilay hoe, ra no natao ny tonony
Aza mamorona !! Rehefa namaky ny hevitrao aho dia tadidiko fa…. Tsaroako izao dia nasehon'ny rahalahiko ahy ny iray tamin'ireo galeriany tamin'izaho 8 taona teo ho eo: S
Mbola tadidiko ny tarehy rotidrotiky ny lamasinina… nitranga izany…. : /
Betsaka ny lesoka nataoko tamin'ny hevitra teo aloha, tsy dia nodinihiko loatra izany.
Amin'ny fotoana ilazako hoe: "Mahaliana ny atiny" tsy midika atiny rehetra akory izany, te-hijery tatitra voasivana, boky manokana na dinidinika izay tsy matetika amin'ny tranokala mahazatra aho.
Zavatra iray amin'izany: tsy ilaina ny manimba ny sainao sy ny torimasoo amin'ny fitetezana zavatra tsy mila.
Ny DW no toerana fanariana Internet. Ny fako ihany no ao. Ny ampahany mahaliana dia tsy azon'ny olona liana.
Tena diso ianao, diso indroa:
"Ny DW dia fanariana Internet"
Ny DW tsy fantatra anarana dia ampahany amin'ny zanak'olombelona izay manala baraka ny sisa amin'ny olona na maneho ny fihetsika / safidy / toe-java-misy eo amin'ny fiaraha-monina sy ny kolontsaina ary ratsy fitondran-tena na etika.
Ny DW tsy fantatra anarana dia ireo rehetra izay nanao toy izany ihany teo amin'ny klioba, fikambanana na endrika tsy miankina hafa ary ankehitriny koa manana ny fisian'izy ireo amin'ny Internet, tsy misy afa-tsy izany.
Ny fako ihany no ao. Ny ampahany mahaliana dia tsy azon'ny olona liana. "
Ao amin'ny faritra tsy dia misy besinimaro na tsy azo idirana amin'ny Internet izay ifanakalozana tsiambaratelo momba ny indostria sy ny politika ary ny varotra sy entam-barotra isan-karazany dia tsy ara-dalàna ny maro amin'izy ireo.
Tsena mainty tsotra izao izay tsy voafehin'ny tompon'andraikitra.
Fa hey, andao hanome anarana mahatsiravina sy mistery izany mba hanampiana antsika hivarotra azy.
Varotra mihomehy marketing. Raha manana fotoana mety ianao dia jereo ny andiany Dilbert, eo amin'ny fizarana 30 (vanim-potoana roa) tena asidra sy manadala ny tontolon'ny orinasa ...
Hahaha, efa manana teti-dratsy ho an'ny andian-tsarimihetsika ianao. Mazava ny hafatro. Amin'ny antsoin'izy ireo hoe DW dia tsy ho hitanao ny valin'ny mistery an'izao rehetra izao. Ny mahaliana ny fako dia tsy midika hoe mijanona ho fako. Raha hiditra amin'ny toerana tsy miankina dia mila "fanasana" ianao (holazain'izy ireo amiko ny fomba hahazoana lalana). Tsy tokony afangaroinao amin'ireo ambiny ireo tranonkala ireo satria tsy tratran'izy ireo intsony. Somary tsy mitombina ilay hoe DW.
Raha ny resaka, momba ny supermarket mainty ... Karazana adala manao ahoana ny orinasa ao amin'ny tsena iray izay tsy itonona anarana, tsy fantatra ary tsy afaka jerena ireo mpivarotra na "mpanome tolotra serivisy"? Paradisan'ny mpisoloky izany. Manafatra fitaovam-piadiana / fitaovam-piadiana / zava-mahadomelina / zazakely / olombelona ianao, mandoa vola amin'ny bitcoins malalanao ianao ary avy eo "raha nahita anao aho dia tsy tadidiko." Afaka mitomany fotsiny ilay lehilahy marani-tsaina satria tsy afaka mankany amin'ny polisy.
Amin'izay tsy fantatro, ny zavatra dia vita, ary mampalahelo fa mahasoa xD
misy ny zavatra rehetra ,, ny tsara, ny siansa «la amoooo»!
Tsiambaratelo MILITARY "megahacker ihany no mahazo azy."
fa ny gore, ny pôrnôgrafia ary ny snuff ********
mampatahotra izy ireo
Mahaliana tokoa, fa mandalo tsy mahita aho.
Androany aho niditra, afaka 8 volana teo ho eo. Izaho dia voakasiky ny famakiana vitsivitsy manelingelina izay tsy tiako aseho, fa porofon'ny fanodikodinana tsy manam-paharoa amin'ny zanak'olombelona, ​​izay toa tsy misy fetra. Mahatsiaro kivy aho ary te-hiteny, ary zavatra tsy azoko esorina ao an-tsaiko izany. Lahatsoratra tsara…
juce dia hoy izy:
Ry namako, nanao ny zava-drehetra aho hiditra amin'ny tranonkala lalina ary mbola tsy vitako izany! Manampy ahy ianao
Mamaly an'i juce
Nampahatsiahy ahy izany fa taona maro lasa izay rehefa nanana ny pentiun 3 aho dia nahavita niditra tamin'ny toerana toy izany, ary tsy natao ho an'ny rehetra izy ireo, tsy mora izany
Liana aho CAIMEO SY GGGQEP ... misy olona niditra tao amin'ny DW manana vaovao momba izany? Matahotra hiditra aho hehe
Ary nieritreritra aho fa nahita ny zava-drehetra tamin'ny fampiasana Ares xD (tsy manisa rano)
Diossss .. nampaniry ahy hihalalina izy ireo. Te hahafanta-javatra loatra: /
Tsy haiko raha tokony hiditra an'io tranonkala io aho, tiako ny fanapahana ary ny zava-drehetra ary mety hahazo fampahalalana mahasoa kokoa momba ny hack aho nefa tsy te hanao zavatra tsy mety ao amin'ny tranonkala lalina…. Jummmm… Tsy haiko fa liana be aho!
Tsy mendrika ahy io. Tsy maintsy natory tamin'ny 3 maraina aho rehefa avy naverimberina tamin'ny lahatsoratra narary mafy novakiako tsy nahy, ary misy zavatra mahaliana vitsivitsy azonao vakiana ao. Salama.
Miaraka aminao ny tantara iray hafa, "vakio tsy misy fikasana," lahy, fa afaka mijanona tsy mamaky ianao rehefa toa mampiahiahy. Inona izany? Pasta ve? Tantara fampihorohoroana? Fanambarana manokana? Nahita zavatra maromaro aho fa tsy nahita zavatra izay manelingelina ahy, ilay horonan-tsary snuff ihany, no nanameloka ny masoko liana tsy nijanona rehefa afaka.
Sombin-nenina manenina an'arivony novakiako. Aleo avelao any azafady.
Eny ary, saingy manizingizina aho fa tsy fantatro hoe aiza ny hiafaranao ary firy ny camouflage an'ny tranonkala hitanao xD
Boky torolàlana momba ny fanolanana angamba
panchonew dia hoy izy:
Tsy fantatro ny antony hidirany ao amin'ny DW raha malemy saina izy ireo ary tsy zakanao ny mahita ireo zavatra ireo….?
Mamaly an'i panchonew
ao amin'ny wiki miafina mihitsy dia milaza izy, pron gore sy ny 2 REHETRA IANAO HANORANA AZY
Jereo fa hadalana ity "tahotra hanao zavatra tsy mety" ity. Tokony ho fantatrao izay tadiavinao ary vakio tsotra fotsiny ny famaritana ireo tranokala ampidirinao na ny lahatahiry novakinao, mahalana no misy olona tsy milaza izay avoakany, ary raha mahita rohy ianao izay tsy milaza hoe aiza no alehany na inona no ao anatiny, tsotra, aza kitihina io.
Tokony hitandrina ianao mba tsy hidona amin'ny zavatra tsy tianao ho hita, mazava ho azy, fa tsy hoe miditra fotsiny no ratsy. Efa nolazaina teo aloha, ny DW dia ny Internet tsotra sy madio ary tsotra, tsy izany fotsiny fa ny index an'ny milina fikarohana ary misy ny protokolony ((ion) vitsivitsy izay mamela hiasa amin'ny anarana tsy fantatra anarana tanteraka, fa tsy mihoatra izany.
Faritra tsy misy lalàna tsotra izao.
Mahita resaka indroa mihetsika horonantsary aho. Amin'ny lafiny iray dia faritra tsy tan-dalàna mampidi-doza, feno hacker vonona hanao na inona na inona. Etsy ankilany, miteny aminay ianao fa ny ampahan'ny Internet no tsy anaovan'ny motera fikarohana. Andao hojerentsika, ao amin'ny ampahany tsy misy index dia misy tranokala mangina tokoa. Betsaka ny tahiry izay tsy raharahain'ny motera fikarohana noho ny antony ara-teknika. Avy eo dia misy I2P, TOR, Freenet, ... ary ireo dia misy banga be dia be izay misy pedofile, conspiranoids, scammers, ireo marary saina, mpikatroka, mpitsikilo, polisy ary ilay "antsitrika" mahaliana.
Tsy kabary roa sosona izy io, toerana mampidi-doza ary misy zavatra ratsy tarehy, fa izany ve no maha ratsy ny manodidina fotsiny? Tsia mihitsy. Mamaky creepypastas aho ary mitady izay karazana famakiana mahaliana ... ny boky dia raha ny tena izy, na olona tena faran'izay bitika mandefa tantara na anecdotes ao amin'ny forum tsy mitonona anarana ... ary tsy misy maharatsy na tsy ara-dalàna izany.
Faritra tsy misy lalàna, ara-bakiteny. Voalohany, satria voafetra ireo izay mahalala sy ireo izay tsy mahay miditra, dia misy banga, izay mahatonga azy io ho sisintany. Faharoa, satria tsy misy fehezan-dalàna io dia tsy mampihatra izay fantatsika, noho izany raha tsy misy lalàna.
Ny tambajotra tongolo, na dia sooo ampiasaina amin'ny zavatra manaloka aza, fantatrao ve fa ampiasaina amin'ny zavatra tsara koa izy io? Tsy i Annony no ohatra tsara indrindra, ny zavatra ataon'izy ireo dia azo zahana amin'ny fomba fijery maro, fa mampiasa sy mamorona tranokala tena hermetika eto izy ireo hiresahana sy hanaovana hetsika antisec. Izy io koa dia afaka ampiasain'ny olona any amin'ny firenena tena 'voafehy' raha tsy hiteny izay tsy te ho tratra.
Ao amin'io faritra amin'ny Internet io dia mitranga ny zava-drehetra, tsotra izany.
Tsy miresaka momba ireo tranonkala tsy miankina izay tsy misy olona mahalala momba izany aho. Miresaka momba ireo izay hitanao amin'ny lahatahiry ho an'ny besinimaro aho (toa ny TORDIR: https: // dppmfxaacucguzpc.tor2web.org). Izany no antsoin'ny ankamaroan'ny DW. Raha liana amin'ny tantara momba ny tsy torimaso sy ny aretin-tsaina ianao ... tsy hiresaka momba ny zavatra tianao aho fa misy koa izany amin'ny tamba-jotra hita maso.
Manantena aho fa mpandeha an-tongotra be dia be no mieritreritra azy io ho toerana tsy misy lalàna. Europol dia efa nahatratra vitsivitsy izay nihevitra fa tsy manana ahiahy.
Ao amin'ny fanehoan-kevitra nataoko teo aloha dia milaza aho fa misy mpikatroka mafàna mampiasa ireo fitaovana ireo. Ny zavatra tsara na ratsy hataon'izy ireo dia miankina amin'ny olona angatahinao. Na izany na tsy izany dia tsy nanoratra aho fa ratsy ny miditra ao amin'ny DW. Tsy ratsy koa ny mikaroka harena any amin'ny toerana fanariam-pako raha mandray ny fepetra mifanaraka amin'izany. Ny manaitra ahy dia ny aura an'ny mistery manodidina ity lohahevitra ity. Betsaka ny mamoaka hatsembohana adrenaline sy hatsiaka an-taonina rehefa mitsidika an'io zava-misy mirazotra io, faly noho ny tahotra na ny te hahafanta-javatra. Mihevitra izy ireo fa tena miavaka. Tompokolahy, ianareo dia misitrika amin'ny alika, sarotra ny mahita zavatra hafa ankoatry ny voalavo sy ny banga. Na iza na iza dia afaka mamorona .onion ary maneso ny mpiasa. Afaka mahita zavatra toa zavatra hita ianao ary tena hadalana izany. Saika tsy misy olona milaza hoe iza izy ireo.
Misy Internet hafa tsy hita maso. Raha ny tena izy, ny ankamaroan'ny Internet dia tsy hita maso ary tsy ampahany amin'ny I2P, TOR, Freenet, ... Ny mila habaka bebe kokoa dia ireo tahirin-tranonkala toy ny http://www.loc.gov/index.html. Ary tsy misy ny loza ateraky ny Internet hita maso. Ny sasany mivoaka miaraka amin'ny .onion ary miditra fotsiny .tk. Raha nanandratra ny lohany i CAIMEO ...
ary tsy milaza aminao intsony aho
Cronos dia hoy izy:
Ah, miverina amin'ny Operation Darknet izany rehetra izany, tokony narahina izany,
Valiny amin'i Cronos
Ny fanontaniako irery dia ny iray ihany ... Inona no idiran'ny DW amin'ny tanjon'ity bilaogy ity? Misy afaka milaza amiko ve?
Ny fampiasana Linux dia azo antoka kokoa isika rehefa mizaha tranonkala lalina, sa tsy izany? Soso-kevitra alohan'ny hidiranao hanao scan auto port. Ampiasao ny nmap.
Avelao aho hanazava, ny olona dia tia mikorontana.
Haleloia dia hoy izy:
Io mpiara-miasa io no fanontaniana mety.
Ity no tokony ho lohatenin'ny lahatsoratra:
Ny tranonkala lalina, toerana lalina feno zavatra tsy tianao ho hitanao.
Olombelona ambany 80%.
Mety ho ny kaody loharano an'ny Skynet io?
Eny, tsy dia misy ifandraisany amin'ny bilaogy izany fa mitondra kolontsaina ho an'ny tarika, voasariky ny te hahafanta-javatra aho, tor, DW, wiki miafina, uffff fa raha avy amin'ny asa aho dia manome ahy iray izay tsy mahita Internet amin'ny fiainako.
PS: nano, creepypasta matotra? manalefaka kely ny lehilahy, fahadiovana ara-tsaina, mankanisa any amin'ny valan-javaboary miala sasatra, ny psyche toa ny efitrano dia mety ho toerana voadona raha tsy diovinao indraindray.
Amin'ny lafiny lehibe ary toy ny amin'ireo tranonkala sy olona rehetra miresaka momba ny tranonkala lalina dia mivaona amin'ny zava-misy izany satria hampitahantsika ny tambajotra tor amin'ny ambaratonga ¬_¬, raha mitovy amin'ny tambajotra fantatsika. net sns, ny fampiasan'izy ireo ny tambajotra Tor ho an'ny .onio domains tsy misy zava-baovao fotsiny dia ampifanaraho ny mpizara iray hanondro izany amin'ny tambajotra tor misy torolàlana maro ao amin'ny internet hanaovana azy ary hiditra amin'ny solontena miafina nefa tsy misintona izay azony atao. ataovy avy eto http://tor2web.org/.
PD tsara kokoa ny manadihady alohan'ny hametrahana basy fa maimaim-poana ny tambajotra tor ary afaka mahita zavatra tsy misy fanaraha-maso ianao ary koa firenena maro no nahavita nanakana ny fidirana amin'ny tambajotra tor.
Raha ny marina, ny fisarahana amin'ny ambaratonga dia momba ny atiny indrindra fa tsy ny tambajotra mihitsy. Ny tambajotra dia tsy miova amin'ny ambaratonga rehetra, ny hany zavatra miova dia ny atiny ary mazava ho azy, ny fomba fidirana. Miaraka amin'ny tranokala mahazatra, tsy misy na inona na inona, tsy azonao atao ny miditra anaty tamba-jotra misy domains .onion
Ovao ny extension ".onion" ho ".tor2web.org" ary afaka miditra amin'ny tranokala mahazatra ianao.
Eny, saingy tratrany ny IP-nao ary raha mitady tsiambaratelo na pr0n na ** snuff ianao dia tratrany ianao ary tsy miandry ny lalana mankany amin'ny fonja haingana!
Ity misy fitsapana izay azo idirana avy amin'ny navigateur mahazatra ary azo antoka kokoa noho ny vidalia.
alucard dia hoy izy:
Tsy vazivazy ny fanakanana azy. Miaraka amin'ny firewall Nextgen misy ips tsara.
Ny pitsopitsony dia tsy ny firenena rehetra no mifehy tsara ny fivezivezena amin'ny Internet (na tsy afaka noho ny antsipirian'ny toekarena).
Nahoana araka ny eritreritrao no misy mpizara proxy maro any amin'ny firenena fahatelo na piraty maimaimpoana?
Ny pitsopitsony dia olona maro no mino fa hahita harena na tahirin-kevitry ny governemanta. Etc. Tena mahavariana ahy ny fiantraikan'ny hollywood amin'ny olona
Valio ny alokard
Tia ny reninao dia hoy izy:
Salama, lahatsoratra tsara hanombohana ny taona, lohahevitra tena tsara ity ny lahatsoratra fahatelo novakiako tanteraka ary na dia ireo fanehoan-kevitra tao aza: https://blog.desdelinux.net/Vao namaky lahatsoratra telo fotsiny aho, saingy dinihiko aloha ity, satria maro ny heviny, ary lohahevitra tena mampiady hevitra izy io. Mahaliana ary nampiala voly ahy ny famakiana ary indrindra ireo fanehoan-kevitra, ary namporisihina koa aho handao ny fandraisako anjara dia ny fanehoan-kevitra faharoa avelako https://blog.desdelinux.net/ Tiako izany ary mahaliana ilay lohahevitra. Miarahaba. 😀
Valio ho an'ny Fitiavan-dreninao
Eny, taloha kelin'ny nidirako dia tsy niditra lalina aho (nandalo ny haavo 3 fotsiny aho). Hitako raha marina ilay zavatra "Suicide Mouse" fa tsy dia notadiaviko loatra. Tsy nahita zavatra mampivadi-po koa aho, na dia nandalo pejy iray na roa aza aho.
P40n misy be dia be, indrindra ao amin'ny rohy misy ny wiki miafina. Kely dia nahasarika ny saiko tao.
Na izany na tsy izany, tsy haiko izay zavatra hitan'i @nano sy i @Blaire Pascal, fa raha toa mampivadi-po izy ireo hoy izy ireo dia tsy velona aho.
Torohevitra: aza miditra amin'ny pry, raha tsy mitady zavatra manokana VERY manokana ianao ary fantaro fa tsy tokony hisokatra ny zavatra. Mampitandrina antsika rehetra.
bah tsy nisy hitako tany Cicciolina na Burne
Eny, tsy azoko mihitsy hoe nisy toy izao, mandra-pamakiako azy tao amin'ity bilaogy ity dia hitako fa tsy nampoizina fa nahatsapa ho toy ny ao anaty matrix aho hahaha
naide dia hoy izy:
Raha ny tena izy, ny dw dia ohatra iray fotsiny amin'ny mety ho toetoetran'ny tranonkala tsy fantatra anarana, izay no tena mampiavaka ny atiny izay arovan'i tor sy ny rafitra misy azy amin'ny "dns" .onion.
Efa fantatrao izay azon'ny zanak'olombelona atao anaty anarana tsy fantatra anarana…. Heveriko fa misy shit fotsiny izay tsy manana baolina zaraina amin'ny tranonkala mahazatra, raha izany no tadiavinao, dia azo antoka fa hisy izany raha mbola ...
Mamaly an'i naide
fanemorana fotoana dia hoy izy:
Tamin'ny fotoana nidirako voalohany teto dia hitako fotsiny io lohahevitra io ary inona no hataontsika ...
Niditra tamin'ny ambaratonga 4 niaraka tamin'ny TOR aho, nanova ny MAC sy ireo tambajotram-bahoaka toa ny U, tsy avy tao an-tranoko na zavatra toy izany ... nitady kaody hacking sy solika izay hitako sy betsaka ... amin'ny hidenwiki azonao jerena motera fikarohana izay manamora kokoa ny raharaha. Izaho manokana dia mbola tsy nahita zavatra tsy mahafinaritra ahy satria raha mahita zavatra toa izany dia mila mitady zavatra mitovy amin'izany ianao mba hisehoan'izy ireo ... misy pejy vitsivitsy izay asehon'izy ireo aminao ny fomba hamafana sy hanafoanana ireo zavatra sasany izay ananan'ny openoffice sy ny biraon'ny Microsoft ampiasain'izy ireo hahafantarana ny zavatra izay nosoratan'ny iray sy izany rehetra izany dia hitako fa paranoida kely izy fa nataoko ihany xD ...
Mamaly ny fanemorana
Andriamanitra tsy fantatro hoe ohatrinona ny ambaratongany izay resabe tsotra! XD
Niditra tao amin'ilay toerana aho dia zavatra iray monja no novakiako momba ny olona niditra tao anaty tranonkala lalina ary namela ahy ho voa mafy, izy dia zanak'alika aman'alina satria nametraka zavatra hitany tamina tranonkala iray mahazatra izy ary nampijaly ahy noho ny olana nahazo ahy ary tsy faly aho. raha izay hitanao dia avelao ho anao! fantaro izay fa averinao foana io sary na sary an-tsaina io foana! imbeciles fa ny tsirairay dia kede amin'ny zavatra niainany dia tsy mamporisika azy!
nampiasa mpanararaotra ianao !!!!!!
Heveriko fa nahita ny iray amin'ireo programa fikandrana tsara indrindra ianao
Raha tianao dia lazaiko anao fa keda ampiasaiko ny critère-nao! fa tsy mino aho fa misy olombelona manao ratsy toy izany! fa amin'ny lehilahy toa adala tanteraka izany. Mahaliana ve izy ireo? lazaiko anao ve? hahita ny hevitrao!
ankoatr'izany dia hitako ho maharikoriko tanteraka izany ary tsy mamela ahy irery aho dia te handray azy amin'ny totohondry! olona mampihomehy izy!
Lazao azafady ampidiniko fa DW ary eny be ny fako fa tsy zavatra hahaliana ahy ankoatry ny CP * ratsy tarehy nefa tsy mahaliana ahy: l
dd dia hoy izy:
marcelo amin-kitsim-po..raha niditra ianao dia tsy nahita na inona na inona? Tsy manana hevitra ianao ary sendra zavatra tsy tianao, tsy noeritreretinao akory izany, marina?
Raha te hiditra ao amin'ny tranokala ianao dia mila mahafantatra fotsiny fa ny zavatra ataonao dia ho anjaranao manokana, izay hitanao, ataovy, izay ifandraisanao aminy dia ho an'ny andraikitranao manokana izany, raha misy zavatra mitranga, aza mijery aho fa tsy hanampy anao.
Mamaly an'i dd
daniiii dia hoy izy:
Hitako eto ny kaody loharano momba ny skype sy ny tena antony tsy itiavan'izy ireo intsony ny hampiasantsika msn ... Izany hoe, atody atody hitako ity fampahalalana ity.
Mamaly an'i daniiii
Novakiako ny lahatsoratrao ary tsara fa manana ahiahy aho hoe ahoana no ahafantaranao hatramin'ny ambaratonga nidiranao, misy marika ve sa noho ny habetsaky ny fampahalalana na zavatra hafa?
Eny, mazava ho azy, toy ny Jetsons, rehefa milentika ao amin'ny Deep Web ianao dia misy famantarana mamirapiratra hita eo amin'ny sisin'ireo kafe mitsingevana.
juanli dia hoy izy:
Dinika tsara tao anatin'ireo fanehoan-kevitra, tsy dia namaky momba ny DW aho fa toa mahaliana, angamba indray andro any dia hiditra amin'ny ranomasimbe kely aho.
Mamaly an'i juanli
milaza ny marina fa mahaliana ity lohahevitra ity ary mety hahatonga anao ho andevozin'ny fahalalana bebe kokoa momba ny tranonkala lalina
Namakivaky ireto toerana ireto aho saingy mbola tsy nahatratra ny ambaratonga farany
Fantatro fa sarotra izany ary mampidi-doza kokoa ary ny marina dia tsy manao risika be loatra aho hehe
http://zonadick.blogspot.com/2013/09/deep-web.html ny tranonkala lalina
Te hahafantatra aho hoe aiza no misy ny tambajotram-pahefana itsinjaram-pahefana toa an'i Freenet na I2P, satria misy koa ny fampahalalana tsy voatanisa amin'ny motera fikarohana.
"Toerana misy an'i Atlantis" …… Tsy haiko ny antony, fa ity Web Deep ity toa fisolokiana goavana….
Diego Isaac dia hoy izy:
azo ampiasaina amin'ny browser de texte ve ny tor?
hanavotra ahy ireo sary matanjaka
Valiny tamin'i Diego Isaac
Tsapako fa ny ankamaroan'ny olona miresaka DW dia tsy inona fa ny vondrona poser izay satria manana distro Linux virtoaly izy ireo, satria manana mari-pahaizana momba ny siansa (izay tsy mahavita ny ankamaroany) na satria mahay mampiasa fitaovana informatika. mamaky sahady efa mahatsapa hackers.
Farano ny asanao, raiso ny fiambenana ny banky na ho voamarina amin'ny hacking etika ianao ary izao raha raisin'ireo matihanina sy manam-pahaizana amin'ny sehatry ny haitao fampahalalana ianao.
boaty tomovino dia hoy izy:
Tsy nomeko baolina mihitsy ... ny marina ... angamba be loatra amiko loatra amin'ny tranonkala "ara-dalàna" io
Mamaly an'i tomovinoencaja
Facundo Facundo dia hoy izy:
Mamaly an'i Facundo Facundo
Mijanona ao amin'ny 3 aho, nanandrana azy tao amin'ny vmware aho hahita
lalàna mpifoka dia hoy izy:
Ps rehefa ataoko miditra ny dw dia vaovao aho ...
Valin'ny lalàna mifoka sigara
mcanijo dia hoy izy:
Ahoana no ahalalako hoe ambaratonga iza aho?
Mamaly an'i mcanijo
bevfg43r dia hoy izy:
Tsy misy ny atao hoe ambaratonga fa sary fotsiny hanehoana ny halehiben'ny Internet lalina, tsy hahita sary na tranokala milaza mihitsy ianao hoe "arahabaina, nahavita ny laharana 2 ianao!" Manoro hevitra anao aho tsy hiditra, tena vitsy ny zavatra mahaliana ary manomboka izao dia lazaiko aminao fa tsy misy ny tranonkala marianas.
Mamaly amin'ny bevfg43r
Lahatsoratra tena mahaliana, ilaina ny mamaky lohahevitra toa an'io.
mahery dia hoy izy:
Niditra an'io tranonkala io aho, ny marina tsy misy hita, izany hoe, nilaza ny rehetra fa nahita zavatra mangatsiatsiaka, ny marina dia, nahita zavatra ratsy toy ny fanapahana loha amin'ny bilaogy narco aho ao ajua, halako ny pôrnôn'ny zaza.
Saingy miverina amin'ilay lohahevitra dia manandrama miditra ary hahita rohy tapaka marobe ianao na tsy hitarika na aiza na aiza hanao na inona na inona amin'izay lazainy, na angamba tsy toy ny teo aloha ilay pejy, amin'ireo rohy izay lazain'ny maro fa manana izy ireo ary tsy hoe mizara izy ireo dia satria tsy manana azy ireo, midira ary jereo fa tsy misy. io ihany no hitantsika amin'ny youtube ao amin'ny pseudo tutorials momba ny fomba hidirana sy tantara maro izay rehefa manadihady dia lainga, ka niditra aho hino fa marina izany ary diso fanantenana. TSY MISY Vaovao
Mahafinaritra ny Internet lalina …… KA IZANY!
Meteza ho afaka dia hoy izy:
Misaotra Andriamanitra fa tena kanosa tokoa aho hiditra amin'ireny tranonkala ireny, mampahatsiahy ahy freenet kely io, izay azoko indray mandeha fa etsy ambony ihany, aza mamporisika ahy hiditra pejy iray
Mamaly an'i befree
rcm dia hoy izy:
Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba ahitako ny resak'ilay sakaizako amin'ny alàlan'ny valiha sy ny fomba hahafantarana azy
Mamaly an'i rcm
fernando lino laura dia hoy izy:
Mamaly an'i fernando lino laura
maria margoth dia hoy izy:
ny motera fikarohana dia tsy manome fampahalalana betsaka momba ny tsena mainty an'ny ¨google¨
Mamaly an'i maria margoth
= (Sendra niditra rohy iray izay niafara tamin'ny .onion aho .. Rehefa nosokafako izy io dia nakatoniko avy hatrany ilay pejy ... Saika nihombo aho? Ho avy ve ilay fbi? = (Efa nisy nametaveta ahy ve?
Misaotra ny info m dia hampiasaina amin'ny fitsangatsanganana ho avy kasaiko hatao hehe
lolol dia hoy izy:
ny namana tsy ara-dalàna, miditra mitady ny fomba hanaovana c4 pistol
Mamaly an'i lolol
Juan Aguilar dia hoy izy:
NY Tsiambaratelon'ny WEB lalina mahatahotra !!
Valiny tamin'i Juan Aguilar
Heveriko fa miaraka amina fikarakarana sasany dia azonao atao ny misoroka an'izay atiny manelingelina sy manararaotra izany fampahalalana rehetra misy izany. Betsaka ny boky mahaliana izay tsy hita ao amin'ny google.
Inona no hitranga raha mivezivezy amin'ny dw aho amin'ny alàlan'ny milina virtoaly miaraka amin'ny linux? misy vintana ho voan'ny zavatra iray ve?
op ity pejy ity 😀
Valiny amin'i MAICOL
juliantre dia hoy izy:
Tsara kokoa aho
Mamaly an'i juliantre
Araka ny nolazaiko hatrizay fa ity lohahevitry ny deepweb ity dia tena malalaka sy mahaliana, raha ny fijeriny ny fomba hidirana ny deepweb ary koa ny fiarovana sy fiarovana ao anatiny, ity lahatsoratra ity dia tena mahaliana satria manazava hevi-dehibe maromaro izay Mikaroka ny deepweb ny olona, ​​navigatera iray manintona ahy hiditra amin'ireo tranokala misy atiny tsy dia fahita firy aho ary tena ilaina koa ny atiny, maro no mety manontany tena hoe aiza no ahazoana ireo rohy Mba hidirako amin'ny tranonkala lalina izay hitako manokana teto amin'ity tranonkala ity. http://www.traficantesweb.com/ Tena manampy izy ireo ary misy fampahalalana mifandraika izay afaka manampy antsika. Fiarahabana
Fa maninona ianao no mpanaratsy an'i Java? iray amin'ireo teknolojia fandefasana programa tsara indrindra misy ankehitriny ... raha hainao ny manazava amiko tsara ... Android dia JAVA fotsiny, ary azo antoka fa manana finday Android ianao ... ampahany tsara amin'ny kaody misy fampiharana na programa izay azonao antoka fa ampiasainao, voasoratra amin'ny JAVA ary koa, Java maimaim-poana ary maimaim-poana, inona ny olana?
Tsy Nanan-tahotra dia hoy izy:
Manoro hevitra foana aho hizaha soa aman-tsara, fa tsy ny zavatra rehetra dia ratsy ao anaty tranonkala lalina, saingy afaka mahita zavatra tsy mahafinaritra tsy tadiavintsika isika, noho izany dia tsara kokoa ny manao izany amin'ny alàlan'ny rohy manome antoka ny fiainana manokana sy ny atiny manokana tadiavintsika, toy izao hisoroka ny tsy ampoizina izahay.
En http://www.deepweb.es hahita fampahalalana marobe ianao amin'ny fomba hidirana, rohy fitetezana azo antoka, pikantsary raha tsy sahy miditra izahay, ary vaovao momba ny internet miafina.
Valio i Dauntless
Niditra aho fa tsy nandalo ny Hidden Wiki
Jose Luis Sotelo dia hoy izy:
Ho hitantsika eo izay mitranga
Mamaly an'i jose luis sotelo
Mba hampitomboana bebe kokoa ny fiarovana anao dia mamporisika anao aho hiditra amin'ny DW avy amin'ny "live-cd" na ny "session ho an'ny vahiny" ao amin'ny OS mba hialana amin'ny fanimbazimbana ny angon-drakitrao manokana voatahiry ao anaty kapila mafy. Ho fanampin'izany, tsara ny hametrahana firewall hamaranana ireo seranan-tsofina fidirana izay misokatra matetika araka ny mahazatra.
-bohiny dia hoy izy:
Androany aho nijery horonantsary iray an'i Lisa Lam, ka nandeha tany Tor ary programa hafa hanafenana ny ip-ko ary niditra amin'ny tranokala lalina, mba hitadiavana vaovao misimisy momba an'ity zazavavy maty tamina fomba hafahafa ity sy ilay horonantsary nalain'ny hotely toa nanao fihetsika hafahafa izy ary niafina tamin'olona tsy tazana tao amin'ilay horonan-tsary. Ny tena izy dia tsy nahita na inona na inona aho, tsy maintsy ho satria pejy vitsivitsy monja no nosoratako, ny iray tamin'izy ireo dia Onionchan, ary tamin'ny famakiana fotsiny ny lohatenin'ireo olona izay "nanolotra na nifanakalo" sary sy horonan-tsary, dia nidina tampoka aho ary tsy afaka nijery akory. Tsy mihevitra ny tenako ho kanosa aho, fa amin'ny fomba fahitako ny tranonkala lalina dia misy pejy hafahafa maro toy ny onion chan. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny famakiana lohateny hoe "Mivarotra zaza vao teraka aho" na "Manakalo sarin-jazavavy 14 taona ho sarin-jazavavy 9 ka hatramin'ny 14 taona", dia nahatonga ahy hieritreritra hoe "soa ihany fa sarotra tadiavina ireo pejy ireo", satria mampiseho fotsiny izay masiaka, macabre, hafahafa ary tsy mahazatra mety ho olombelona. Menatra ny hafa aho.
Mamaly an'i Gaba
Tsy mila mankany amin'ny Web Deep ianao amin'izany. Mahita zavatra be dia be ao amin'ny YouTube ianao ary misy tanjona sasany.
Kimberly dia hoy izy:
Salama tsara tolak'andro manontany tena aho hoe ahoana no ahafahako miditra amin'ny fanambadiana lalina?
Azafady mba mila ny fanampianao aho
Valio amin'i kimberly
Rebecca gonzalez dia hoy izy:
Tatitra manankarena be avy any nano, izay azoko natao ihany no nandoa ny hevi-dehibe https://zarza.com/internet-profunda-deep-web/ ; izay hiresahantsika ny tsenan'ny lalàna momba ny serivisy fanaraha-maso, izay nifanarahana matetika hiarovana ireo tahiry, kaontin'ny mpampiasa ary fanairana ny olan'ny fiarovana alohan'ny hitaterana azy ireo manerantany. Raha io no dinihinao, vakiteny atolotra anao.
Valiny tamin'i Rebecca Gonzalez
Bridges dia hoy izy:
Niditra tao amin'ny DW aho fa tsy noho ny fahalianana te hahafanta-javatra, nanadihady aho ary nahita fa mety misy zavatra mahaliana hamaky sy handany ora, izay no mahaliana ahy rehefa miditra aho, fa tonga teo amin'ny tapany akorandriaka sy ny marianas, raha ny tena izy Mbola tsy manana fampahalalana betsaka momba ireo faritra ao amin'ny DW ireo aho, afaka misy olona milaza amiko zavatra hafa izay fantatro tsara momba ny akorandriaka sy ny marianas ?: o
Mamaly an'i Bridges
Torke dia hoy izy:
aza minono, maninona no mamorona? Ny an'ny ambaratonga: tena SHIT, efa ela aho no teo ary ny ambaratonga dia creepypasta mahatsikaiky, raha lazaina, mianatra aloha ny programa ary avy eo hack, ny tsara indrindra dia tsy noforonina tamin'ny fijerena horonantsary YouTube momba ny fidirana ny mampihomehy DW
Mamaly an'i Torke
anjely herrera dia hoy izy:
Ahoana no ahafahako misintona fitaovana ho ahy?
Mamaly an'i angel herrera
lollipop dia hoy izy:
Tsy lehibe araka ny nolazain'izy ireo izany ary tsy misy mistery, nefa feno zavatra maharikoriko….
Mamaly amin'ny lollipop
Cristian Left Espinoza dia hoy izy:
toa zava-baovao io amiko, tiako ho fantatra izany
Valiny tamin'i Cristian Left Espinoza
Te hiditra anaty tranonkala lalina aho
kevin quintero dia hoy izy:
fanazavana tsara be namana
Mamaly an'i kevin quintero
Tonga tany aho, manenina ny zava-drehetra hitako, indrindra ny faritra natokana ho an'ny mpikomy amin'ny fireneko, ilay mpanao heloka bevava Pablo Escobar ...
Tsy hiditra ao amin'ny DW intsony aho
ALEX TRAX dia hoy izy:
Ny ankamaroan'ny zavatra hitako dia avy amin'ny dw
Heveriko fa be loatra ny fiheverana azy
Na dia marina aza fa misy horonan-tsary sy torolàlana hanamboarana fitaovam-piadiana vita an-trano, na explosive izay tsy tokony ho hitan'ny rehetra.
Raha ny snuff kosa dia montage eto sy any Chine ary na iza na iza mihevitra ny hafa ho diso hevitra.
Raha ilaina izany raha ny amin'ny fahazoana zavatra haingana kokoa.
Ary mazava ho azy, misy sary vetaveta amin'ny ankizy, fa aiza no tsy hisy?
Mahazo baraka aho.
Heveriko fa toy ny internet iray manontolo ity, mila mampiasa azy ianao fa tsy hoe mampiasa anao izy ireo.
Valio amin'i ALEX TRAX
jhorel dia hoy izy:
Milaza fotsiny aho hoe tsia, ny mankany amin'ny tranonkala lalina no mampatahotra indrindra
Mamaly an'i jhorel
adalberto dia hoy izy:
Mamaly an'i adalberto
DUNCAN MAC COMISH dia hoy izy:
NY WEB LALALALANA TSY RENY MAHASOA, VOAFITRA MAFY, TSY MISY INDRINDRA IZAO EO AMIN'NY LALANA NA EO AMIN'NY LALALALANA lalina
Valiny amin'i DUNCAN MAC COMISH
STVN dia hoy izy:
Ny Dw ihany no tiako hidirana raha te hanana fidirana amin'ny famoronana sy fiasan'ny "script" amin'ny Wow, izay lalao xd an-tserasera
Nojereko hatraiza hatraiza ary tsy misy te hampianatra momba an'io.
Misy mahalala izany ve? Sa fantatrao raha mahita azy ireo ao amin'ny Dw aho?
Valiny amin'ny STVN
samantha dia hoy izy:
Misy manana rohy avy amin'ny tranonkala lalina izay ahafahako mivarotra ny voako?
Mamaly an'i samanta
Gazety TuxInfo # 54 misy